चिन्डेहरू मालामाल - गाईजात्रा - प्रकाशितः भाद्र ९, २०७३ - साप्ताहिक
विश्वकै सबैभन्दा राम्री युवतीसँग डेटिङमा जान पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
ओहो, त्यो अवसरका लागि सलाम । यदि त्यस्तो भयो मैले के गर्नु र, जे गर्नु छ उनैले गर्नेछिन् ।
पुरुषले पनि मेकअप गर्न पाए भने के गर्लान् ?
हाम्रो दाह्री–जुँगाका कारण महिलाको जस्तो फूल मेकअप त सम्भव छैन, हाफ–मेकअप, क्वाटर मेकअप सम्भव होला । म जस्तो दाह्री पालेकाहरूले नाक र निधारमा मात्र प्रसाधन प्रयोग गर्ने छन् ।
पिसाबबाट सवारी साधन चल्ने भयो भने ?
हरेक व्यक्तिको ढाडमा फलानो पेट्रोलपम्प...लेखिएको प्लेकार्ड टाँसिन्थ्यो । जस्तो— ‘सत्यराज पेट्रोल पम्प’ । कार अथवा बाइकमा पेट्रोल सकिने बित्तिकै एक लिटर जति निकाल्यो, दौडियो ।
साप्ताहिकमा केटाको ब्लोअप छाप्न के गर्नुपर्ला ?
सुवास ढकाल दाइलाई पत्रिकाको सम्पादनको जिम्मेवारीबाट मुक्ति दिएर एउटी सुन्दर युवतीलाई प्रधानसम्पादक नियुक्त गर्नुपर्छ ।
पूर्वबाट नअस्ताउने भएकाले ।
रेखा थापाले बिहे गरौं भनेर जिद्धि गरिन भने ?
म रेखालाई सादर अनुरोध गर्दै भन्ने छु—‘रेखा, म अहिले असाध्यै व्यस्त छु, प्लिज हेमन्त शर्मालाई भन्नु ल ।’
केबुलकार बीचमै केही घन्टा बन्द भयो भने ?
त्यो अघिको पिसाववाला पेट्रोलले काम गर्दैन र त्यहाँ ? ए साँच्ची, मैले त बिर्सेछु । केबुलकार त बिजुलीले पो चल्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फोन गर्थें । ओहो, त्यो पनि गाह्रो छ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्क नै ध्वस्त छ ।
यदि त्यस्तो रोग आयो भने हाम्रा चिन्डे साथीहरू पो मालामाल हुन्छन् होला ।
तीजको सांगीतिक कार्यक्रममा नांगा शिवजी प्रकट भए भने ?
शिव लिंगलाई सधैं नांगो देखिरहेको त हो नि ? खासै फरक पर्दैन ।
कृष्णजी प्रकट भएर वरदान माग भने ?
‘तपाईंका १६ हजार गोपिनी झैं मेरा पनि केही हजार गोपिनीसँग माया–पिरती गाँसियो भने माफ दिनु हुन अनुरोध छ’ भन्ने वर माग्थें ।
मिस नेपालले तपाईंलाई अचानक थप्पड हानिन् भने ?
‘तिमी मिस नेपाल होइनौ ठिस नेपाल रै’छौ’ भनिदिन्छु ।
लाठीचार्ज गर्न कुन चार्जर प्रयोग गरिन्छ ?
डन्ठे चार्जर (प्रहरी) प्रयोग गरिन्छ ।